दक्षिण कोरियाको बुसान मा अवस्थित सामुन्द्रिक तट ‘हेउन्दे विच’ बन्द हुँदै !! – Korea Pati
दक्षिण कोरियाको बुसान मा अवस्थित सामुन्द्रिक तट ‘हेउन्दे विच’ बन्द हुँदै !!
August 9, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दक्षिण कोरियाको बुसान मा अवस्थित सामुन्द्रिक तट ‘हेउन्दे विच’ बन्द हुँदै !!
दक्षिण कोरियाको दोश्रो ठूलो शहर बुसानले यस क्षेत्रमा रहेका सबै सामुन्द्रिक तटिय क्षेत्रहरु ब’न्द गर्ने निर्णय आइतबार गरेको छ।
कोरियामा अहिले राजधानी सउलभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा को’रो’ना फै’लन थालेपछि बुसानले आफ्नो क्षेत्रमा भि’डभा’ड हुने सामुन्द्रिक वि’चहरु सबै ब’न्द गर्न लागेको हो।
स्वा’स्थ अ’धिकारक’र्मीहरुका अनुसार अहिले कोरियाको राजधानी तथा त्यस वरपरका क्षेत्रमा को’रो’ना घ’ट्दै’ गइरहेको छ। सा’माजिक दू’रीका क’डा नि’य’म ला’गू गरेपछि यस क्षेत्रमा सं’क्र’मण घ’ट्दै गइरहेको हो।
तर राजधानी भन्दा बाहिरका क्षेत्रमा भने को’रो’ना फै’ल’न थालेको छ। अहिले कोरियामा गर्मी बिदा भएकाले मानिसहरु बिदा मनाउन घर बाहिर घुमफिर गर्न थालेपछि सं’क्र’मण ब’ढेको बताइएको छ।
बुसान शहर सरकारले यस क्षेत्रमा रहेका प्रमुख ७ वटा समुन्द्रको बिच ब’न्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा बुसानको विश्व प्रसिध्द हेउन्दे बिच पनि परेको छ। त्यसैगरी ग्वाङगाल्ली तथा सङजोयोङ तट पनि ब’न्द गर्ने भएको छ।
यि सामुन्द्रिक तटहरु आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुका लागि प्रमुख गन्तब्य स्थल हुन। सोमबार विहान देशभर १ हजार ४ सय ९२ जना सं’क्र’मित देशभरबाट थपिएका छन। यसमा बुसान शहरबाट मात्रै १ सय २३ जना थपिएका छन। यो संख्या कोरियाभरीमा तेश्रो धेरै हो। सउलमा ४ सय १५ जना तथा ख्यङ्गिदो क्षेत्रमा ४ सय ८ जना थपिएका हुन।
September 13, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने